MACLUUMAADKA TARANKA EEYAHA GOLDENDOODLE IYO SAWIRO - EEYAHA
Macluumaadka Taranka Eeyaha Goldendoodle iyo Sawiro
Dahab dahab ah / Poodle ey isku dhafan oo isku dhafan
Macaroni ee Goldendoodle da'da 7 sano
Goldendoodle ma aha eey saafi ah. Waa iskutallaab udhaxeysa Dahab dahab ah iyo Poodle . Habka ugu wanaagsan ee lagu go'aamiyo dabeecadda noocyada isku dhafan ayaa ah inaad ka raadiso dhammaan noocyada iskutallaabta isla markaana aad ogaato inaad ka heli karto isku-darka mid kasta oo ka mid ah astaamaha laga helo nooc kasta. Maahan in eeyeyaashan eyda isku dhafan ee la dhalayey yihiin 50% saafi ah ilaa 50% daahir ah. Aad bay caan u tahay in kuwa wax soosaara ay tarmaan iskutallaabno jiil badan .
F1 = 50% Hawlgab Dahab ah iyo 50% Poodle. Kani waa Dahab u gudub Poodle kani waa jiilkii ugu horreeyay, oo dhaliya carruur caafimaad qabta. Nooca timuhu wuxuu noqon karaa mid jilicsan sida Dahabka, ama wavy / shaggy ama mararka qaarkood muuqaal dabiici ah oo u eg Irish Wolfhound (laakiin leh jilicsanaan jilicsan), way daadin karaan ama ma daadin karaan, arday isku qashin ah ayaa kala duwanaan kara.
F1-B = 25% Hawlgab Dahab ah iyo 75% Poodle (F1 Goldendoodle iyo Poodle iskutallaab). Kani waa Goldendoodle dib loogu soo celiyey Poodle.
isku dhafka american bulldog faransiiska bulldog
F2 = F1 Goldendoodle iyo F1 Goldendoodle iskutallaabta. Isku darka waxaad kuheleysaa boqolkiiba isku mid ah Dahabka iyo Poodle isku dar ah sida aad u heli laheyd F1 Goldendoodle.
pitbull sanka buluug qasan Brindle
Macluumaadka Mini Goldendoodle
Bailey the Goldendoodle markuu jiray 9 bilood
Topaz Goldendoodle oo ah 3 sano jir leh nooca jaakad Poodle ah
'Waxaan ka qaaday sawirkan Amos, madowkeena Goldendoodle laba maalmood ka hor Kirismaska. Isagu waa eeyga ay ugu jecelyihiin dadka isaga yaqaan oo dhan. Isagu waa eey jecel oo farxad leh, wuxuu jecel yahay inuu ku jiifo sariirta oo mararka qaarkood marka niyadu dhacdo kubad ciyaaro. Meel kasta oo aan tagno waa inuu sidoo kale aado. Waxaan ku nool nahay ku dhowaad laba hektar oo dhul ah sidaa darteed wuxuu helayaa jimicsi fara badan. Wuxuu jecelyahay inuu ciyaaro dharka oo xirto dhamaan noocyada dharka. Xaqiiqdii waa mid layaableh caruurteena wuxuuna u ogolaanayaa iyaga inay ku sameeyaan wax kastoo ay isaga ku doonayaan. '
Bailey the Goldendoodle oo daaqadda ka fiirinaya
Goldendoodle eey, xushmad sawir Ayers Pampered Pets
Charly, Ingiriis Goldendoodle oo qabow ah oo qabow ku jira 1 sano iyo 4 bilood, oo lagu kariyo Aspen Kennels
'Tani waa wiilkayaga yar ee la jecel yahay Deeq Dexter Doodle. Isagu waa Goldendoodle ah kareem aad u kareemo badan. Isagu waa farxad saafi ah. Wuxuu kujiraa 10 bilood sawirkaan wuxuuna taaganyahay kudhowaad 24 inji dherer dhulka hoostiisa ilaa garbaha dushiisa, culeyskiisuna waa ilaa 65 rodol. Goldendoodle waa a Dahab dahab ah / Standard Poodle iskutallaab, laakiin inuu yahay jiil F1b, isagu waa dhabbe-gacmeed sidaa darteed aabihiis wuxuu ahaa Goldendoodle dhab ah hooyadiisna waxay ahayd Poodle Standard, sidaas darteedna wuxuu ahaa mid aan daadin oo aan xasaasiyad lahayn. Waxaan ka helnay Kareemka Dalagyada 'Goldendoodles & Poodles'. Doodles waa xiiso-jecel oo aad u xiiso badan. Wuxuu jecel yahay inuu subaxnimadiisa ka helo Hooyo iyo Aabe ka dibna uu u aado orodkiisa weyn. Marnaba ma jiro daqiiqad caajis ah guriga agtiisa. Aad buu u jecelyahay. Isaguna waa eey aad u fiican. Wuxuu jecel yahay xeebaha iyo inuu helo ulo. Wuxuu jecel yahay roobka. Isagu waa orodyahan aad u wanaagsan oo sifiican ugu ciyaara dhamaanba alaabti uu ku ciyaaro. Isagu waa mid aad u jilicsan oo aan dagaal badan lahayn. Waan jecel nahay Deekdawg !! '
Da 'weyn Goldendoodle oo baxsad ah
Eeg tusaalooyin dheeraad ah oo ku saabsan Goldendoodle
Sawirada Goldendoodle 1
Sawirada Goldendoodle 2
Sawirada Goldendoodle 3
Sawirada Goldendoodle 4
Sawirada Goldendoodle 5
Sawirada Goldendoodle 6
Sawirada Goldendoodle 7
Sawirada Goldendoodle 8
jack russell somali isku dhafka bulldog
madow iyo caddaan cavalier king charles spaniel
toy dawaco yorkie Pit qas muqisho for sale
jiir terrier min pin mix
sawirada eey chiweenie ah